Al-Shabaab Guriceel duullaan ku ahaa oo la dilay | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab Guriceel duullaan ku ahaa oo la dilay
Duullaan Al-Shabaab ku qaadaan degmada Guriceel, waxaa ugu danbeysay 2008, markaas oo dadka degaanka iyo Koox diimeedka Ahlu-sunna oo is biirsaday kula dagaallameen kana saareen magaalada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dagaal dhex maray Cutubyo ka tirsan Ciidanka Lugta iyo kuwo ka tirsan ciidanka Al-Shabaab u qaabilsan duqeymaha uu saaka xilli hore ka dhacay degaanka Dhagaxyaale oo dhanka Koofureed ka xiga Guriceel.
Sida ay Keydmedia Online u xaqiijiyeen Saraakiisha hoggaamineysay dagaalka, Ciidanka Lugta, ayaa ku guuleystay in ay ka hor tagan koox hoobiyayaal ku hubeysan oo doonayay in duullaan duqeymo ah ku qaadaan Guriceel.
Meydad ka tirsanaa Al-Shabaab, gaari nuuca raaxada ah iyo hub nuucyadiisu kala duwan yiihin ayay soo bandhigeen ciidanka Dowladda, waxayna sheegeen in ay baxsadeen xubno kale oo kuwa la dilay ku wehliyay dagaalka.
Gaariga raaxada, oo uu nuuciisu yahay [PARADO], ayaa la sheegay isbuucii hore tagay degaanka Dhagax-yaale, taas oo sababtay in dadka degaanku dareemaan dhaqdhaqaaq ciidan, maadaama inta badan ay tuulada ku imaan jireen lug.
Kooxdaan, waxa ay hore duqeymo uga geystay Dhuusamareeb, waxa ay dhawaan tageen Matabaan iyo Ceeldheere, waxaana la warinayan in ay Koofurta gobolka ay ka wadaan dhaqdhaqaaq xooggan oo ka dhan ah Guriceel.
Maamulka Qoorqoor, ayaa markaan u muuqda gacan ku ganbad, waxaa hore gacantiisa uga baxay degaanno badan oo dhaca gobolka Mudug, sidoo kale, degaanno hoos taga Cadaado ayaa galay gacanta Al-Shabaab, halka ay hadda weerar ku yihiin degaanno aysan ku dhawaad 15 ano haweysan.